Kim Ariyor? Caller ID & Block APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ကင်မ် Ariyor? Caller ID ကို & Block
ကင်မ် Ariyor? Caller ID ကို & Block ကို APK ကို
ပျော်စရာတကယ်တော့: "? ကင်မ် Ariyor" "ခေါ်အဘယ်သူနည်း" ကိုဆိုလိုသည်တူရကီ☺အတွက်
ဘာကြောင့်လဲ CALLER ID ကို?
ဒါမှမဟုတ်လွဲချော်ခေါ်ဆိုခကိုလက်ခံရရှိ - - ဖုန်းခေါ်ဖြေဆိုခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်သင်တို့ရှေ့မှစကားပြောဖူးဘူးကုမ္ပဏီထံမှ။ သင် "ခေါ်အဘယ်သူနည်း" ထင်ကင်မ် Ariyor နဲ့လား သငျသညျခကျြခငျြးဒီခေါ်ဆိုမှုသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာသူသည်တွေ့နိုင်ပါသည် - သင်ပင် * အများဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်များကိုမှသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကင်မ် Ariyor? သငျသညျဘီလီယံခန့် 1.5 ကျော်နံပါတ်များပေါ်တွင်ခေါ်ဆိုသူ၏အသေးစိတျကိုပေးသနား! ဖုန်းနေဆဲအူနေစဉ်ကညာဘက်ကိုသင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအမည်, လိပ်စာနှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသထားတယ်။ ဒါဟာသင်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်စနစ်တကျကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွငျဆငျနိုငျဆိုလိုတယ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ယူဖို့မဆုံးဖြတ်။ အဖိုးမဖြတ်နိုင်!
KIM ARIYOR သနည်း ပါသလား
ကင်မ် Ariyor? Caller ID ကိုပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်း, ခေါ်ဆိုမှုအားလုံးပေါ်တွင်သင်ပေးသည်။ ရှာရန်ဖုန်းနံပါတ်များ, ပိတ်ပင်တားဆီးမှု spam များကိုခေါ်ဆိုသူများနှင့်ခေါ်ဆိုခဖြစ်ပျက်နေစဉ်, ခေါ်ဆိုသူကိုခွဲခြားသတ်မှတ်!
KIM ARIYOR? အင်္ဂါရပ်များ
➢ CALLER အိုင်ဒီ: သင်သည်သင်၏အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲတွင်အရေအတွက်ကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, သင်ခေါ်ဆိုသူတွေအကြောင်းအံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်။ ကင်မ် Ariyor နဲ့လား ယခုသင်အမှန်တကယ်ကာလ၌ခေါ်ဆိုသူ၏ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
➢ Block ခေါ်ဆို: နှောင့်အယှက် telemarketers, လိမ်လည်မှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်အခြား spam များကိုခေါ်ဆိုသူများရှောင်ကြဉ်ပါ။ ရိုးရှင်းစွာအကင် Ariyor နှင့်အတူဖုန်းခေါ်ပိတ်ဆို့?
➢ SEARCH အရေအတွက်: အမည်, လိပ်စာတစ်ခုသို့မဟုတ်အရေအတွက်ကနောက်ကွယ်မှလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးအချက်အလက်ဆန်းစစ်ပါ။ ကင်မ် Ariyor နဲ့လား သငျသညျကမ်ဘာလုံးဘီလီယံခန့် 1.5 ကျော်ခေါ်ဆို '' နံပါတ်များပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်နိုငျပါသညျ!
➢အရန်ကူးအဆက်အသွယ်: သင်တစ်ဦးဖုန်းအသစ်သို့ပြောင်းရန်သည့်အခါအဆက်အသွယ်ဆုံးရှုံးပင်ပန်းနေပြီလား ကင်မ် Ariyor? 's ကို Backup ကို function ကိုနှင့်အတူသငျသညျတဖနျအဆက်အသွယ်ရဲ့အရေအတွက်ကဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
➢ UPDATE အဆက်အသွယ်: အလွယ်တကူအမည်နှင့်လိပ်စာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းကြွယ်ဝစေရန်နံပါတ်များကိုထည့်ပါ။ ကင်မ် Ariyor နဲ့လား သင်ဖုန်းကိုစာအုပ်ထဲတွင်သိမ်းထားချင်ကြောင်းခေါ်ဆိုအသစ်နံပါတ်များနှင့် profile များကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
➢ MY ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း: သင်ကင်မ် Ariyor အတွက်သင်၏ပရိုဖိုင်ကို update များကသူတို့ကိုချေါသောအခါအခြားအသုံးပြုသူများတွေ့နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. စီမံခန့်ခွဲ? စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောဂုဏ်သတင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စသတင်းအချက်အလက်ထဲမှာမလိုချင်တဲ့အမည်ဝှက်ကိုဖျက်မည်။
➢ SCREEN ကို SETTINGS: သင်, ပွခေါ်ဆိုမှု ID window ၏တည်နေရာကိုရှေးခယျြနှငျ့သငျသတင်းအချက်အလက်များ Display ကိုပြသချင်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအဘို့ရွေးရန်ပေးပါသည်ရာရှေးခယျြနိုငျ app ကို setting များကို၌။
နေဆဲတွေကိုသေချာဖတ်ရှုလေ့လာဖို့? ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကင်မ် Ariyor ကို download လုပ်ပါ? app ကို Now! ☺
CIAmedia GmbH သည်
ကင်မ် Aryior? သြစတြီးယား-based CIAmedia GmbH ကတီထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စီအိုင်အေ (Caller သတ်မှတ်ခြင်း App ကို™) - CIAmedia ကိုလည်းဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရတဲ့ခေါ်ဆိုမှု ID app ကိုနောက်ကွယ်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပလက်ဖောင်းအားလုံးဖြတ်ပြီးကျော် 45 သန်းမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းစီအိုင်အေဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါပွီ။ သငျသညျကင်မ် Ariyor ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်? သင်သည်လည်းစီအိုင်အေနဲ့တူငှါ - ဒီမှာထုတ်စစ်ဆေး: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ciamedia.caller.id&hl=en
သင်သည်မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်သို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါက support@ciamedia.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းစာမျက်နှာများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး:
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://kimariyorapp.com/
စီအိုင်အေ App ကိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ: http://kimariyorapp.com/faq/
* ကံဆိုးချင်တော့သူကကင်မ် Ariyor ဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့သည်မဟုတ်လော ပုဂ္ဂလိက / အသံတိတ် / စာရင်းမသွင်းထားသော / ဟောင်း directory ကိုနံပါတ်များကိုများအတွက်ခေါ်ဆိုသူ ID ကိုပြသပါသည်။
ကင်မ် Ariyor သုံးပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်? Caller ID ကို & Block ။ ကျနော်တို့မှန်မှန်, စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းအောင်ဒီ app ကို update features အသစ်တွေကိုထပ်ထည့်နှင့်သင်၏အကြံပြုချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတိုးတက်မှုပေါင်းစပ်။ အကြှနျုပျတို့သညျဒီ app ကိုသုံးပြီးခံစားရန်ဆက်လက်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကင်မ် Ariyor? Caller ID ကို & Block
11.08 ကို MB
Caller ID ကို App ကို Dev မှ Ciamedia